Dhaqanka Shiinaha | Wararka Safarka
Mariela Carril | 07/09/2021 17:00 | Shiinaha, dhaqanka
Shiinaha waa dal cajiib ah oo leh millenary, hodan iyo dhaqamo kala duwan. Waxay la mid tahay adduunyo kala fog, oo leh afafkeeda, ciidaheeda, zodiac u gaar ah, iska indho -sarcaad ah ... haddii ay sahlanaan lahayd ku -hadalka Shiinaha, waxaan u malaynayaa inay sare u kacayso ardayda luqaddaas. Laakiin luqadda Shiinaha waa mid aad u adag ...
Yaan la qoomamayn, maanta waa inaan ka hadalnaa kan weyn Dhaqanka Shiinaha.
2 Dhaqanka Shiinaha: diimaha
3 Dhaqamada Shiinaha: cuntada
4 Dhaqanka Shiinaha: zodiac
5 Dhaqanka Shiinaha: ciidaha
Shiinaha waa dalka ugu dadka badan dunida, ayaa leh in ka badan 1400 bilyan oo qof waxayna qaadataa toddobaadyo badan in la dhammaystiro tirakoobka qaranka mar kasta. Intaa waxaa dheer, in muddo ah hadda oo gacanta lagu hayo fikradda “laba nidaam, hal dal” (hanti -wadaag iyo hanti -wadaag), waxay noqotay awoodda dhaqaale ee dunida ugu horreysa.
Shiinuhu wuxuu leeyahay 25 gobol, shan gobol oo ismaamula, afar degmo oo hoos taga orbit -ka dhexe iyo laba gobol oo maamul oo gaar ah kuwaas oo ah Macao iyo Hong Kong. Waxay sidoo kale sheeganeysaa Taiwan, inay tahay hal gobol oo kale, laakiin jasiiraddu waxay ahaan jirtay dowlad madaxbannaan tan iyo Kacaankii Shiinaha.
Waa dal aad u weyn in waxay xuduud la leedahay 14 ummadood y qaab -dhismeedkeedu waa kala duwan yahay. Waxaa jira lamadegaan, buuro, dooxooyin, dooxooyin, geedo jiq ah, iyo dhul hoosaadyo. Dhaqankeedu waa kun sano tan iyo markii ilbaxnimada Shiinaha ay dhalatay qarniyo ka hor.
Waxay ahayd ku dhawaad ​​dhammaan jiritaankeedii millenniyadii oo dhan boqortooyo, laakiin 1911kii waxaa dhacay dagaalkii sokeeye ee ugu horreeyay ee afgembiyay boqortooyadii ugu dambaysay. Dareenkan, waxaan aad ugu talinayaa in la arko Boqorkii ugu dambeeyay, filim aad u fiican oo uu sameeyay Bernardo Bertolucci.
Kadib dhammaadkii Dagaalkii Labaad iyo ka bixitaankii Japan ee dhulkii Shiinaha shuuciyadu waxay ku guuleysteen dagaalkii sokeeye waxayna ku soo rogeen dawladda. Waa markaas Shiinehii laga adkaaday u haajiray Taiwan oo aasaasay dawlad gooniya, weligeedna laga sheeganayay dhul -weynaha. Goor dambe ayaa imaan doonta sannado isbeddel ah, waxbarasho hantiwadaag ah, beero wadareed, macaluul iyo ugu dambayn, koorso ka duwan tii dalka gelisay qarnigii XNUMXaad.
Dhaqanka Shiinaha: diimaha
Waa a dal diimeedyo badan halka ay ku nool yihiin Buddhism, Taoism, Islam, Catholics iyo Protestant. Maadaama dastuurka hadda jira uu ixtiraamayo xorriyadda cibaadada oo ah arrin aad muhiim ugu ah dadka.
Diimahaas waxay ku leeyihiin magaalooyin badan oo ku yaal Shiinaha, waxayna ku xiran tahay qowmiyadda halkaas deggan. Waxaa mudan in la caddeeyo taas waxaa jira in ka badan 50 qowmiyadood gudaha Shiinaha, inkasta oo aqlabiyaddu ay tahay Han, laakiin waa run in dhaqanka Shiinaha guud ahaan laga gudbo Taoism -ka iyo Confucianism -ka, maadaama ay yihiin falsafadahaas oo maalin walba soo gala.
Dad badan oo Shiine ah ayaa ku dhaqma qaar ka mid ah caadooyinka diimaha qaarkood, ha ahaadeen rumaysnaan sax ah ama sheeko -faneed. Ducooyinka awoowayaasha, hoggaamiyeyaasha, ahmiyadda dunida dabiiciga ah ama rumaysnaanta badbaadintu waa joogto. Kaaga sii darane, maanta ma aha in mid ka mid ah diimahaas ay yihiin kuwa ugu badan oo la soo rogo. Dhammaantood, haa, aad bay u gaboobeen oo hodan yihiin oo laamihiina meel walba way ka soo dhaceen.
El Buddhism waa asal Hindiya qiyaastii 2 oo sano ka hor. Shiineeyska qowmiyadda Han ayaa u badan Budhiistaha, sidoo kale kuwa ku nool Tibet. Dalka waxaa ku yaal goobo diimeed oo badan oo Buddhist ah sida Goose Pagoda duurjoogta ah ama Macbadka Jade Buddha.
Dhinaca kale, Taoism wuxuu u dhashay dalka oo weliba waa qiyaastii 1.700 sano. Waxaa aasaasay Lao Tzu waxayna ku saleysan tahay dariiqa Tao iyo "saddexda khasnadood", is -hoosaysiinta, naxariista iyo miyir -qabka. Waxay xoog ku leedahay Hong Kong iyo Macao. Sida goobaha Taoist, waxay ku taal Buurta Shai ee gobolka Shandong ama Macbadka Ilaaha Magaalada, ee Shanghai.
Waxaa sidoo kale jira meel loogu talagalay islaamka gudaha Shiinaha, wuxuu ka yimid dalalka Carabta qiyaastii 1.300 oo sano ka hor maantana waxay haysataa ilaa 14 milyan oo rumaystayaal ah oo jooga Kazak, Tatar, Tajik, Hui ama Uyghur, tusaale ahaan. Markaa, waxaa jira Masaajidka Weyn ee Xi'an ama Masaajidka Idgar, ee Kashgar.
Ugu dambeyntii, Masiixiyadda iyo noocyada kale ee Masiixiyadda waxay Shiinaha uga yimaadeen sahamiyayaal iyo ganacsato, laakiin waxay noqotay mid sii fiicnaatay oo la aasaasay ka dib dagaalladii Opium ee 1840. Maanta waxay ku dhowdahay 3 ama 4 milyan oo Masiixiyiin Shiine ah iyo 5 milyan oo Protestant ah.
Dhaqamada Shiinaha: cuntada
Jeclahay. Maxaan dhihi karaa? Waan jeclahay cuntada Shiinaha, Aad bay ugu kala duwan tahay maaddooyinka iyo hababka karinta waana wax aan macquul ahayn in lagu caajiso dhadhanka ay leedahay. Waxa laga ogaado dhaqanka cuntada Shiinaha waa taas Waxaa loo qaybiyaa gobollo leh habab kala duwan oo cunto -karin ah.
Sidaas awgeed, waxaan haysannaa cunnada Waqooyiga Shiinaha, Galbeedka, Shiinaha Dhexe, Bariga iyo Koonfurta. Mid kastaa wuxuu leeyahay dhadhankiisa, waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo habka loo kariyo. Shiinuhu waxay jecel yihiin inay wax cunaan oo waxay rabaan inay raacaan calaamad tag. Meesha uu marti kasta fadhiyo ayaa muhiim ah, maadaama oo martida sharaftu aysan la mid ahayn kan kale. Iyo ilaa qofkaas gaarka ahi dareemo inaan cidina samayn. Sidoo kale waa inaad sameysaa rooti ugu horreeya.
Waqtiga cuntada waa inaad u oggolaataa kuwa waaweyn inay marka hore sameeyaan, waa inaad qaadataa baaquli sida kuwa kale yeelaan, waxaa jira far gaar ah oo farahaaga ku jira, way ku habboon tahay inaad cuntada ka qaadato taarikada kuu dhow si aan inaad miiska saarto oo aad dhibto, ha buuxin afkaaga, la hadal afkaaga oo buuxa, cuntada ha ku dhejin shoogga laakiin si toos ah u taageer, waxyaalahaas oo kale.
Barqad gooni ah ayaa mudan shaaha ee shiinaha. Waa dhaqan dhan. Shaaha ayaa halkan lagu soo saaraa oo la cunaa maalinta oo dhan, maalin kasta. Haddii aad u malaynayso inay jirto shaah madow, casaan iyo cagaar ah ... aad baad u qaldan tahay! Ka faa'iidayso safarkaaga si aad u ogaato wax walba oo ku saabsan shaaha. Tayada shaaha waxaa lagu qiimeeyaa udugga, midabka, iyo dhadhanka, laakiin tayada shaaha iyo xitaa koobka ayaa u qalma. Deegaanku sidoo kale waa muhiim, markaa daryeel ayaa lagu sameeyaa jawiga, farsamooyinka, haddii muusig jiro iyo in kale, muuqaalka ...
Waxaa jira safarro si gaar ah loogu talagalay in lagu barto taariikhda shaaha ee Shiinaha iyo falsafadda.
Dhaqanka Shiinaha: zodiac
Zodiac-ka Shiinaha waa meerto 12 sano ah sanad walbana waxaa matala xayawaan oo leh sifooyin gaar ah: jiir, dibi, shabeel, bakayle, masduulaagii, abeesadii, faraskii, riyihii, daanyeerkii, diiqii, eygii iyo doofaarkii.
Este 2021 waa sanadka dibiga, calaamad dhaqameed awoodeed ee dhaqanka Shiinaha. Waxaa inta badan loo maleeyaa in sannadka dibigu noqdo sannad wax bixin doona oo nasiibka keenaya. Ma jiraan calaamado loo arko nasiib xun? Haa waxay u muuqataa sidaas ma wanaagsana in la dhasho sanadka ariga, inaad noqon doonto raacane oo aadan noqon hoggaamiye ...
Taas lidkeeda, haddii aad dhalatay sannadka masduulaagii waa yaab. Dhab ahaantii, kuwa dhashay sanadka masduulaagii, abeesada, doofaarka, jiirka, ama shabeelka ayaa ugu nasiibka badan.
Dhaqanka Shiinaha: ciidaha
Dhaqankaas hodanka ah, runta ayaa ah in ciidaha iyo dhacdooyinka dhaqanku ay ku badan yihiin dalka. Sannadka oo dhan, iyo aqlabiyadda ugu badan waxaa loo habeeyay sida ku qoran jadwalka dayaxa Shiinaha. Ciidaha ugu caansan waa Bandhig-Dhex-Dhexe, Sannadka Cusub ee Shiinaha, Xafladda Barafka Harbin, Bandhigga Shoton ee Tibet, iyo Bandhigga Doonyaha.
Intaa ka dib, waa run in ay jiraan xaflado cajiib ah oo ka dhaca Beijing, Shanghai, Hong Kong, Guilin, Yunnan, Tibet, Guangzhou, Guizhou ... Sidaa darteed, haddii aad danaynayso inaad markhaati ama ka -qaybgale ka ahaato mid kasta, waa inaad hubi waxa dhici doona markaad tagto.
Sida for xafladaha dibadda laga keeno Waxay sidoo kale ka dhacaan Shiinaha, Kirismaska ​​Maalinta Jacaylka, Maalinta Thanksgiving ama Halloween, si loogu magacaabo magaca ugu wanaagsan. Nasiib wanaag waxaa jira hay'ado dalxiis oo abaabula safarro iyagoo tixgelinaya dhacdooyinka iyo ciidaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » dhaqanka » Dhaqanka shiinaha